Kuzoba yini igama lesistimu yokusebenza elandelayo ye-Mac? | Ngivela kwa-mac
Kuzoba yini igama lesistimu yokusebenza elandelayo ye-Mac?
I-WWDC isondela lapho sizohlangana khona nohlelo olusha lwe-Apple. Akekho ongabaza ukuqhubeka kwesiteketiso se-macOS kanye nohlobo, 10.14, kepha okwamanje asinakho ukuvuza kwegama isoftware elandelayo yeMac ezoba nalo.
Phakathi kokuqagelayo, sithola amagama afana nalawa: IMojave (ugwadule oludumile), iSequoia (ipaki likazwelonke), iSonoma neVentura (amadolobha amabili aseCalifornia). I-Apple igcina igama elisha liyimfihlo, futhi lokhu akulula kubo. Ngisho iyaqhubeka nokwakha izinkampani zamagobolondo emazweni ase-Asia ukubhalisa izimpawu zokuhweba. Abathakazelayo bayazi futhi baqala ukuphenya amagama abhalisiwe ezinkampani ezisanda kufakwa.
Eqinisweni, iCambodia nePhilippines benze izinkampani ezintsha ezibhalise amagama e-United States. Uma kunomdlalo phakathi kwamagama abhaliswe ngumkhiqizo ezweni lase-Asia, negama elibhaliswe e-US kungenzeka ukuthi inkampani efana ne-Apple izolisebenzisa.
Ukukhumbula amagama akamuva ahambisana neMacOS: Mavericks (10.9), Yosemite (10.10), El Capitan (10.11), Sierra (10.12) kanye neHigh Sierra (10.13), kuyabonakala ukuthi kuzoqhubeka nalawa magama. Ukuqondana okwenzekile okugcwaliseka emazweni amabili yiMojave, ngakho-ke, yilona ozongenela amaphuzu amaningi.
Noma kunjalo, I-Apple ingasebenzisa amanye amagama evuselela njalo. Kusukela ngo-2014, ivuselela amagama anjenge: Rincon, Grizzly, Farallon neMonterey. Ezinye, ngakolunye uhlangothi, azivuselelwanga, njenge: Redwood, Big Sur, Pacific, Miramar, Redtail, Condor. , I-Tiburon ne-Shasta, noma eyodwa ezwakale kakhulu ngonyaka owedlule njenge-candidate: California.
Ngakho-ke, uhlu lwabaqokelwe luyanwetshwa. Uma ufuna ukwazi ukuthi ideskithophu yakho izobukeka kanjani kwi-macOS elandelayo ngokususelwa egameni layo, lokho esikutshela khona ukuthi umuntu ngamunye ozobhapathizwa usho ukuthini: Mojave Kugwadule eCalifornia I-Sonoma Kuyidolobha elisenyakatho yeCalifornia, elaziwa ngokukhiqiza kwalo iwayini. Ventura ngomunye umuzi, odume ngokuntweza olwandle. Sequoia Kuyipaki yemvelo yamaSequoias amakhulu, izihlahla ezinesiqu esikhulu, ezijwayelekile e-USA. Amakhosi Canyon Kuyindawo yentaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Kuzoba yini igama lesistimu yokusebenza elandelayo ye-Mac?
Beats Decade Collection, enye yezimanga zeWWDC 2018 iveziwe
Izinsuku zokuthumela zezinqubo ezikhethiwe zeMacBook zinguJuni 6